Chrome, Safari uye Edge zvakabiwa pazuva rekutanga remakwikwi | Linux Vakapindwa muropa
Chrome, Safari, uye Edge zvinobvarurwa zviri nyore pazuva rekutanga remakwikwi
Edza sezvaungaita, hapana software yakakwana, kana maererano nezvirongwa kana maererano nemaitiro anoshanda. Yese software iri pasirese ine notupukanana uye zvimwe zvacho zvinokanganisa zvinogona kushandiswa kuzvibaya. Izvi ndizvo zvakaratidzirwa zvakare kuTianfu Cup kuChina, kupi vabira matatu evashandisi vewebhu anonyanya kushandiswa: Chrome, Edge uye Safari, maviri ekupedzisira ari iwo mazano akaisirwa default muWindows uye macOS zvakateerana.
La China Tianfu Mukombe (Via ZDnet) ndiyo imwe nzira yePwn2Own. Muzviitiko zvese izvi, ese ma software uye zvishandiso zvinoyedzwa mabhureki e "Zero-Day", ndiko kuti, kusaremekedzwa kusinga nyorwe uye kusingazivikanwe kunogona kushandiswa nemushandisi yakaipa. Chinhu chinonyanya "kunetsa", mumakotesheni, ndechekuti Chrome, vhezheni yechinyakare yeEdge (iyo «Chromium» vachiri mu beta) uye Safari yakabiwa pazuva rekutanga remakwikwi.
Chrome, Safari, uye Edge yakawira pazuva rekutanga
Mamwe masoftware nemagadgeti akawira mumakwikwi aive Adobe Reader, Microsoft Office 365, D-Link DIR-878 router uye Qemu-KVM inomhanya paUbuntu, iri pazuva rekutanga Pazuva rechipiri, Adobe Reader uye D-Link ma routers akapunzika zvakare, zvikava zvinonetsa, pamwe neVMware Workstation inoshanda system yekuteedzera software.
Makwikwi haana kunyanya kuzivikanwa asi, se Pwn2Own, inoshanda zvinhu zvitatu: kutsvaga bugs dzavanogona kugadzirisa, ivo vanokunda vanowana mari uye, iyo inogona kuverengerwa mune yechipiri poindi, kuti vanoongorora chengetedzo vanozvizivisa ivo. Kuti iye haana mukurumbira zvinorevawo kuti zvese zvakadzama zvezvimwe zvipembenene zvakawanikwa kuti zvinoendesa kune vakagadzira software hazvizivikanwe.
Yakanaka kune vashandisi ve Firefox ndeyekuti bhurawuza reMozilla harina kutaurwa, saka zvinofungidzirwa kuti vakatadza kuzvirova mumakwikwi aya. Zvese zvikonzero zvekuchera Chrome uye kushandisa fire fox chikumbiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Chrome, Safari, uye Edge zvinobvarurwa zviri nyore pazuva rekutanga remakwikwi
Aya ndiwo maonero angu, shamwari. Iri ndiro dambudziko chairo uye rinonetsa rekuve mushandisi wechero ipi kubva kune iyo Chromium browser, yeayo pane akawanda atove.
Zvino mufaro wakadii kwandiri kuti kuyedza kweMozilla kunoratidzwa mune mhando yebrowser yayo uye munhau dzakanaka dzakadai.
Uye ini ndakaverenga kuti ivo vanoda iyo Edge browser kuti imhanyewo pa linux, neiyi kumashure iwe unofanirwa kufunga nezvayo kana iwe uchida kuishandisa zvakakomba. Kwazisai uye senguva dzose zvinonakidza zvinyorwa.
Nzira yekufambisa sei imba yenhau? Nyaya yepepanhau reHindu
Calculator yeGNOME. Kupenya kudiki, yakawanda yekushandisa